Geoinformatics, daabacaadda ugu dambeysa 2009 - Geofumadas
Janaayo, 2010 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Tani, taas oo fikradayda ay tahay mid ka mid ah joornaalada ugu wanaagsan ee ku saabsan arrinka geospatial, waxay xidheen 2009 leh shaabad leh xirfad leh; in uu daabacado 7 heeshiis ah dib u eegis nidaamsan software bilaash ah iyo qalabaynta sahaminta, dambe (8 2009), waxay soo bandhigeysaa isbeddellada calaamadaha ah ee qaadaya dhinaca juquraafi iyo dhacdooyinka qaar ka mid ah meheradaha aan bilaashka ahayn ee dhexe.
Halkan waxaan soo koobayaa qaar ka mid ah mowduucyada ugu waaweyn.
Magaalooyinka dhijitaalka ah iyo sida loo helo 3D Geo LandXplorer wuxuu muujiyaa qaabka Google Earth.
GIS qof walba, version cusub ee ArcGIS Explorer, oo hadda leh awoodo badan iyo sida aad ka arki kartaa ... Ribbon oo ah isbedel aan dib u dhac lahayn.
Shirka user ee ESRI / Europe
GIS, Cadastre iyo Diiwaangelinta Dhulka. Tani waa a wareysi lala yeeshay Nick Land, taas oo inoo sheegaysa aragtida ESRI ee ku saabsan cadawga iyo sida ay u arkaan waxqabadyada sida INSPIRE, Cadastre 2014 iyo WPLA.
Waxaa jira maqaal ku saabsan Symposium Dhiibo
Ma jiraan dib-u-eegis waqtiyeedka, laakiin xayaysiiska waxaan ka tagnaa rajada guud ee xarunta Focus Spectra. Adiguna waa inaad aragto in aad leedahay aragti.
SuperGeo ayaa sidoo kale ka dhex muuqda xayeeysiinta CD CASH Waxbarashada iyo SuperGIS Image Server
Tani waa mawduuca dhexe of this edition, waxaan la xoqo tifaftirka kooban cajiib ah ee maqaal xiiso 24-26 of pages on isbeddellada, guulaha iyo caqabadaha qabo fikirka ah maamulka xogta iyo sida network waxaa ka shaqeeya deegaanka geospatial si weyn.
Run ahaantii 2010 waxay noqon doontaa sanadkaas dib u habeynta dalabyada daabacaadda ee shabakada si ay u sii wadaan mawduucan, xoojiyaan mawduuca sida:
Navteq wuxuu rabaa inaad gaarto meesha aad ku socoto
Goolashadii iyo waqtigeedii hore.
Waxaa jira mowduucyo kale, waxaa habboon in la eego oo laga soo dajiyo pdf ururinta.
AutoDesk Bentley Systems ESRI Google Earth majallado
Post Previous«Previous Poker, wax ka bedelka dhibaatada
Post Next Beddel midabka asalka ah: AutoCAD ama MicrostationNext »